PressReader - Ilanga: 2018-11-26 - KAZINGCWABEKI IZITHANDANI EZASHA ZANGQONGQA
KAZINGCWABEKI IZITHANDANI EZASHA ZANGQONGQA
Ilanga - 2018-11-26 - Izindaba - THANDEKA NGOBESE noNOMFUNDO NGWANE
IYABALISA imindeni yezithandani ezasha zangqongqa zivakashelene emjondolo obekuhlala kuwona isoka eMayville, eThekwini.
Kuthiwa kwaqubuka umlilo lezi zithandani zilele, zasha zangqongqa. Lezi zithandani nguMnu Thabani Goge (28) waseFaye, eNew Hanover, nesinqandamathe sakhe, uNkz Philiswa Mkhize, waseNtuzuma.
Imindeni yazo ithi seyakhanyisa amakhandlela yaze yawacisha ilinde imiphumela yolibofuzo yokuthi ngabe yibona ngempela yini laba abatholwa kulo mjondolo ababelele kuwona.
Unina kaPhiliswa, uNkz Buyi Ngcongo, uthe indodakazi yakhe yahamba ngomhla ka-15 kuNdasa (March) ivakashele isoka layo eMayville kanti ebusuku bazovelelwa yingozi, kuqubuke umlilo emjondolo ebebekuwona, basha bobabili bangqongqa.
Uthi wabizwa emuva kwendaba esetshelwa ukuthi indodakazi yakhe kayisekho emhlabeni, makaphuthume ayobona umzimba wayo ngaphambi kokuba uyiswe emakhazeni.
Uthi nangempela wafika wamhlonza ukuthi nguyena. Uthi ngemuva kwalokho umphenyi wecala wathi ngeke bavele bamnike isidumbu njengoba eshone ngengozi futhi eshile, kuzodingeka ukuba baqale benze ulibofuzo ukuthi nguyena ngempela.
“Le miphumela sesiyilinde saze sakhathala ingafiki kusukela ngoNdasa kuze kube yimanje. Besilokhu simfonela umphenyi wecala athi ayikafiki. Kuthe kugcina wangabe esalubamba ucingo uma simfonela. Uma sithi siya esiteshini saseMayville lapho esebenzela khona, kasisizakali njengoba kuvele kuthiwe akekho, uphume ngokomsebenzi.
“Sicela ukuba uNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele, alusukumele udaba lwethu. Sesiside lesi sikhathi silindile. Siyazi ukuthi imiphumela yolibofuzo iyalindwa kodwa okwethu sengathi sekudlulele njengoba sekuyophela unyaka,” kusho uNkz Ngcongo.
Umndeni kaMnu Goge nawo ukhala esifanayo.
Uthe sewazama wakhathala ukuthola isidumbu sendodana yawo njengoba belokhu betshelwa into eyodwa, kuthiwa mabalinde.
Umalume kaMnu Goge, uMnu Nkosi Dube, uthe njengoba bengakalifihli ithambo likamshana wakhe balokhu benesilonda njalo enhliziyweni.
“Sesifisa ukuba le miphumela ifike kungaze kushaye ukhisimusi sisebumnyameni, singazi noma sijabule yini noma siqhubeke nokuzila,” kuzikhalela uMnu Dube.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe ucela ukuba kulindwe amaphoyisa njengoba esenza uphenyo.
Uthi uyakuqonda ukuthi sesiside isikhathi asebesilindile kodwa ucela babekezele, ngeke liphele leli sonto bengayitholile impendulo egcwele yokuthi kubambe kuphi.
UMnu Cele ube esezicelela ukuba bathintelwe yena abasize. ILANGA lithe uma lixhumana naye wathi ucela kuthintwe bonke abangaphansi kwakhe, yena uzongenelela uma sebehlulekile.
Uma siya esiteshini, kuvele kuthiwe, uphume ngomsebenzi.
BAYAQEDA abafundi abaningi namhlanje ukubhala izivivinyo zabo zokuhlolelwa umatikuletsheni. Laba ngabanye baseVukuzakhe High School eMlazi eThekwini.
UNKZ Philiswa Mkhize noMnu Thabani Goge, izithandani ezasha zangqongqa kusha imijondolo eMayville.